DEG DEG:- Dagaal culus oo haatan ka socdo deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal culus oo haatan ka socdo deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Janaale ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in goor-dhow uu halkaasi ka bilawday dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanadda Al-shabaab oo iyagane dhinac ah.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ay ciidamada huwanta ah ay weerar culus ku qaadeen fariisimo ay dagaalyahanadda Al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanka Janaale, waxayna labada dhinac dagaalka isku adeesanayaan hubka noocyadiisa kala duwan.
Mid ka mid ah dadka ku nool deegaanka Janaale oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in deegaankaasi weli laga maqalaayo rasaasta iyo madaafiicda ay labada dhinac isku adeegsanayaan.
Illaa iyo haatan ma jirto faah faahin intaas dheer oo laga helaayo dagaalka, iyadoona sidoo kale aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Dagaalkaan ayaa la sheegayaa inuu saameyn aad u ballaaran ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee ka jiray deegaanka Janaale, waxaana aad u kacsan xaaladda goobta uu haatan dagaalka ka soconaayo.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa inta badan weeraro kala duwan ku qaada deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose, iyagoona kadib la wareega deegaanadaasi, balse dib uga baxa.